I-Croob Cottage, Amakamelo okulala angu-2 anobhavu oshisayo
Ballyward, Northern Ireland, i-United Kingdom
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Brendan
Indlwana yamaholide esanda kulungiswa enamakamelo okulala angu-2 kanye nobhavu oshisayo, ezungezwe eduze kwe-Slieve Croob Scenic Loop phakathi kwe-Castlewellan ne-Dromara.
Jabulela ikhefu lokuphumula bese usuka emhlabeni kuleli khaya lamaholide elithokomele kodwa elivulekile. Hlola izindawo eziningi ezinhle ezizungezile noma mane nje uphakamise izinyawo bese uphumuza umoya. Ukuziqhayisa ngesitofu esibaselwe ngokhuni nobhavu oshisayo ngiyaqiniseka ukuthi lokhu ngeke kube nzima kakhulu ukukufeza ngenkathi ubuka imibono yasemaphandleni edonsa umoya.
Leli yindlwana elidala lendabuko elinezici eziyingqayizivele nezixakayo kodwa elinesikhala esiningi kanye ne-mod cons nxazonke.
Ingxenye ye-'The Cottages @ Slievenisky'.
I-Cottage itholakala ezansi kweSlieve Croob, amamayela angu-5 ukusuka eCastlewellan emaphandleni athule futhi anokuthula aziwa ngeSlievenisky. Omakhelwane bakho abaseduze bazohlanganisa izimvu nezinkomo zendawo kodwa ungakhathazeki ukuthi banobungane.
Njengoba ikotishi lingama-350m ngaphezu kwezinga lolwandle elibekwe ngaphakathi kwesigodi esincane ukubukwa ngosuku olucwathile kuhle kakhulu. Ukubukwa kolwandle kanye nezintaba zaseMorne ikakhulukazi.
Jabulela ikhefu nathi futhi uhlole izindawo eziningi eziseduze eziseduze no-Slieve Croob khona kanye emnyango wakho. Kunezindawo eziningi ezishisayo ezidumile zasendaweni ezihlanganisa iTollymore neCastlewellan Forest Parks enhle, izintaba ezinhle kakhulu zaseMorne futhi ngingakhohlwa amadolobhana amahle asendaweni anjengeDromara, iDundrum neNewcastle ibanga elifushane nje. Ibhishi laseMurlough nalo lifinyeleleka kalula.
Kunokuningi ongakubona nokwenza.
Ngihlala ibangana nje elincane futhi ngizokujabulela kakhulu ukusiza.
UBrendan Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Ballyward namaphethelo